Egweri Wheel Suppliers na Factory | China egweri wheel Manufacturers
Njirimara ngwaahịa: nchekwa ngwaahịa, arụmọrụ dị elu, oke nkenke, ihe na-eyi na-eguzogide, na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide, yana atụmatụ nke nguzogide mgbatị dị elu, nguzogide mmetụta, nkwụsi ike na-eguzogide, ngwangwa ngwa ngwa, ịmị ire ụtọ, ndụ ogologo ndụ.
1. The okporo ájá tree na-mere site kere ájá na a pụrụ iche esichara iko eriri igwe ntupu.
2. Product atụmatụ: edo grid na abrasive ọka oriri, ogologo ọrụ ndụ, nnukwu eyi pin pin ebe, okpomọkụ dissip na ndị ọzọ Njirimara. Ngwurugwu na-egweri bụ oge 3-5 nke otu ngwaahịa ahụ, ihe nchekwa dị elu.
3. Kwesịrị ekwesị maka ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ ụgbọala, iwepụ nchara, iwepụ agba na ọrụ ndị ọzọ.
Hot-enwe na elu-edu resin na abrasive
Product atụmatụ: ezi ngwaahịa kwụsie ike, sharpness adịghị ọkụ na workpiece, agafeghị oke ekweghị ekwe, ọkacha mma abrasive ihe onwunwe, ike na-adịghị mfe dapụ ，
na o nwere njirimara nke ike ọdụdọ, mmetụta na ekwe ike.
Ngwaahịa ndị kwesịrị ekwesị maka: nkịtị ígwè (n'akuku ígwè, square ígwè, ewepụghị ígwè, rebar, ígwè anwụrụ, wdg), nnukwu ígwè, akwa ekweghị ekwe ígwè, igwe anaghị agba nchara, anwụ nchara, alloy ígwè, wdg